FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA BULL TZU - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Bull Tzu
Alika mpihetsiketsika Bulldog / Shih Tzu frantsay
Alika mifangaro miafina Bulldog / Shih Tzu frantsay— 'Mahafinaritra i Mia, milalao ary malina. Tiany ny maka bola sy kilalao atsipintsika ho azy. Rehefa ratra sy faly amin'ny fakana izy dia mitaky ny saintsika amin'ny hodi-kazo avo sy avo lenta izy raha tiany ny manipy ny baoliny na ny kilalaony. Mahasosotra sy mahafatifaty miaraka amin'izay. Alika falifaly izy ary tia miara-misalahy aminay amin'ny sofa. Sariaka amin'ny olona sy alika hafa izy. Azo antoka fa anisan'ny fianakavianay i Mia ary tiany ny manodidina anay hatrany. Alika 'mailo' tsara izy, ary manara-maso ny vodin-trano any ambadiky ny tranokala misy hazo na hazo.
Ny alika Bull Tzu dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Bulldog frantsay ary ny Shih Tzu . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Alika mifangaro miafina miafina Bulldog / Shih Tzu
'Ity i Yoji, ny French Bulldog / Shih Tzu mixako. Ny sary voalohany dia izy mandritra ny 8 herinandro. Amin'ny faharoa dia manodidina ny 3 taona izy. Alika mampihomehy, milalao, mamy ary hendry izy. Nahita azy tamin'ny alàlan'ny mpiompy Shih Tzu any Tacoma, WA aho, izay nanao dokambarotra a fako an'ny 'Fuzzy Frenchies.' Izaho dia nitady zaza Bulldog frantsay tamin'izany fotoana izany ary liana te hahafantatra, ka niantso aho. Fitiavana aloha izany. Tsy azoko antoka raha sendra lozam-pifamoivoizana na fikasana ny fako, saingy voaporofo fa fitambarana toetra tsara izy io. Ny reniny dia Bulldog frantsay madio izay milanja 17 pounds eo ho eo. Nanana ny fahasahiranana niteraka tany Frenchie izy, ary nitaky cesarean hamonjy ny zanany 3. Toa tsy nitovy taminy ny rahalahin'i Yoji, satria hitan'ny tompony nandehandeha tany aminy aho indray andro, ary nosakanany aho ary nanontaniany hoe maninona aho no manana ny alikan'izy ireo. Tena naka roa sosona taminy izy ireo, ary hitanay ihany fa mpitrosa fako izy ireo. Sahabo ho 22 pounds sy 4 taona i Yoji izao. Ankizivavy tena falifaly sy salama izy. Ilay alika tsara indrindra ihany! '
Lisitry ny alika mitambatra Bulldog frantsay
Alika Bull Tzu frantsay: sary an-tsokosoko voaangona
amerikana bulldog amerikana afangaro amin'ny alika kely pitbull
amerikana pit bull terrier miloko mainty
sary an'ny teritera omby any an-davaka
miniature pincher jack russell terrier mix
ahoana ny alika lahy tsy mandeha amin'ny laoniny
sarin'ny pitbull chihuahua mix